Muddee 28, 2018
Akka warrii lafaa jedhutti waraana naannoo shanii fi ka al-shaaab ganna kana qofa marroo hedduu Mooyyale hadhe
Lolii daarii Oromiyaatii fi naannoo Somaalee maaf hin dhaabanne,Xiinxaltootii maan jedhan?
Lola kanaan nama kuma hedduutti baqata hedduutti lubbuu dahba. Mooyyalee haga Cinaaksen waluma fakkaatti. Akka warrii lafaa jedhutti waraanuma hidhatee makiinaa wal fa’ee yaahutti daari Oromiyaa duudee nama fixa.
Mooyyale Sadaasaa fi Muddee qofa marroo hedduu hadhan. Warra nama fixeen himatan keessaa hagii tokko waraana mootummaa Federaalaa ka biyyaa eegaa dhufe fa.
Warrii lafaa jaarolee fi bulchootii guurratee rakkoo tana mootummaa isaan bulchutti himachuuf karuma Finfinnee mara taatullee akka jarii fedhutti loli hin dhaabanne.
Ijoolleen dhiyoo tana Yaaballotti hiriirate akkana jette:
Motummaan Itoophiyaa…yo jiraate
Mootummaan Oromiyaa…yo jiraate dhiigii jiguu ha dhaabatuu
Akka bulchaan aanaa Mooyyalee,Baggajjaa Morgee jedhetti waraanii dhiyoo guyyaa sagal Mooyyale hadhe nama hedduu fixee hospitaala gubee,biirolee mootummaa,manneen abbaa qabanii fi waan hedduu balleesse.
Waraana kana keessaa liyuu hayilii somaalee qofaa mitii al-shabaab jiraacuun bulchaan aanaa Mooyyalee waan hedduun mirkansa.
Warqata ragaa nama isaanii ka du’ii keessaa guuran
Nama isaanii ka waraana keessatti qabanii fi waan hedduun beekan.
Qawwee fi qalayii jarii namaan hadhu hedduun akka jarii biyya ollaatii fa'atee dhufe waan hedduun beekan jedha
Waraanii kun maaf hin dhaabanne?
Akka bulchaan aanaa jedhutti warra tanaan jiraatutti jira.
Warra tanaan horetti jir
Warra Oromoo akka kanaan lafa irraa oofuu fedhutti jira
Mootummaa duriitti keessa jiraa jedha
Dr. Awol Aloo
Dr. Awol porofeesera yuniversitii UK jiru,Kiilitti porofeesera.Akka Dr.Awol jedhutti mootummaan lola daangaa Oromiyaa kana humnaan dhaabuutti hin jiru
"Humna fayyadamuu irratti rakkootti mullata humnaanis tahee qabbaneessuu irratti. Humna dhabe moo illaacha biraatti dhabe?” jedhee gaafata.
Itti gaafatamii guddaan nagaa naannoo Oromiyaa akka Dr.Awol jedhutti harka mootummaa Oromiyaa jiraa yoo dadhabe mootummaa Federaalaatti iyyachuu male.Taatullee adoo namii du’uu callisuu hin qabu.
"Tasbaggiin jiraachuu baannaan waan babbardeeroo ummati jaalatu kun, jijjiiramii ummatii fedhu kun fagoo hin deemu.”
Akka daarekterii Omn,Jawaar Mohaammad jedhetti rakkoon danngaa Oromiyaa xiyyyeeffannaa argachuu malte.
Jarii biyya nagaa dhowwulleen akka Jawaar jedhutti gamuma gamaan ibidda qabsiisee mootummaa ammaa kana miila lafaa fuudhuu fedha.
Mootummaan rakkoo daangaa tana dhaabuuf karoora jabaa lafa keeyyachuu male jedha.
“Adoo waldhabii jala hin qamnee dhaabuu hinuma dandahan gama kanaan laafinnaa mootummaa hin jira.”
Gaafa jaarorlee biyyaatii fi bulchootii naannoo waan Mooyyaletti deemuutti jira himachuuf Finfinnee dhufan silaa caqasnii lola Mooyyalee ka dhiyoo dhaabuu hinuma dandahan jedha.
"Warra waraana keessa jiru ka shira xaxu achii kaasuu irratti lafa irra harkifachuutti jira. Rakkoo Mooyyalee sun dhaabuu hin dandahan ture.”
Akka jecha Jawaaritti Miidiyaan mootummaa guddisee rakkoo hin dubbatu “mootummaan waan lafaaf waan itti fakkaatuuf rakkoo dhagahuu hin fedhu jedhee,” jedha Jawaar.
Lolii daangaa kun dhaabachuu baannaan daangaa bira dabree mootummaatti dabraa jedha Jawaar.
Lola akkanaa kana waraanaa fi poolisiin dhaamsuu male.Lola daangaa dhaabuuf walii galtee siyaasaa jabaa, daandii cehumsaa qajeelaa agarsiisuu fi warra jijjiirama fidee fi ka jijjiirama barbaadu jabaatee waliin deemuu qaba jedha, Jawaar.